Tọọzde Izuụka nke Atọ n'Oge Adventi
Tọọzde Izuụka nke Atọ n’Oge Adventi
December 8, 2021 by lectionary
TỌỌZDE IZUỤKA NKE ATỌ N’OGE OLILE ANYA ONYE NZỌPỤTA
Dinwenụ, njọ anyị na-ewetara anyị iwe na ọnụma. Nụrụ arịrịọ anyị na-arịọ ka inye anyị nkwụdosiike na ike. Mee ka ọbịbịa nke Nwa Gị wetara anyị añụrị nke nzọpụta. Site na Dinwenụ anyị Jesu Kristi ..
Ihe Ọgụgụ nke mbụ – 54:1-10
Kwebe ukwe gị nwaanyị aga, gị bụ onye na amụtaghị nwa; kwesie ukwe ike ma werekwa olu ike tie mkpu, gị onye na-anọbeghị n’ihe ụfụ nke ịmụ nwa. N’ihi na ụmụnwaanyị na-amụtabeghị nwa ga-abawanye karịa ụmụ onye nọ na di, ọ bụ Yahweh na ekwu.
Mee ka ala ebe obibi gị buwanye ibu, gbatịakwa akwa I ji ekpuchigide ebe obibi gị, alakwala azụ, gbatịa eriri ya, mekwaa ka osisi ya sikwa ike n’ala. N’ihi na Ị ga-agbasa n’akụkụ ụwa niile, ụmụụmụ gị ga-achụpụ ọtụtụ mba n’obodo ha bichie na ha. Atụkwala egwu ọbụla maka na ihere agaghị eme gị, kwụsie ike n’ihi na a gaghị emenye gị ihere, n’ihi na Ị ga echezo ihere mere gị mgbe Ị bụ agbọghọbịa; Ị gaghị echetakwa ụwa ọjọọ dịka nwaanyị ajadu. N’ihina onye kere gị bụ di gị, aha ya bụ Chineke nke igwe ndịagha; Onye Nsọ nke Izrel bụ onye nzọpụta gị, aha ya bụ Chineke nke ụwa niile. N’ihi na Yahweh akpọọla gị, dịka nwaanyị e chezọrọ echezọ emewapụrụ obi na mmụọ, dịka nwaanyị a lụrụ ọhụrụ a chụpụrụ achụpụ, Osebụrụwa na-ekwu. Naanị nwa obere oge ka m gbahapụrụ gị, manà aga m eji nnukwu obi ebere kpọghachi gị azụ. Maka nnukwu iwe nke m were naanị obere oge, ezoro m ihu m n’ebe Ị nọ, ma n’ihi ịhụnaanya m na enweghị njedebe, aga m emere gị ebere, ọ bụ Chineke onye nzọpụta gị na-ekwu. Maka na n’ebe m nọ ihe a dịka n’oge nke Noa: dị ka m siri ñụọ iyi na mmiri nke Noa agaghị ekpochapụ ụwa ọzọ, ana m añụ iyi na a gaghị eweso gị iwe ọzọ ma ọ bụ baara gị mba.
Nnukwu ugwu nwere ike isi n’ebe ọ nọ pụọ, ma ọ bụ, e bugharịa obere ugwu, ma ịhụnaanya m n’ebe Ị nọ ga adigide, ma ọgbụgbandụ udo mụ na gị gbara agaghị enwe mmebi, Ọ bụ Yahweh onye nwere obi ebere n’ebe ị nọ kwuru nke a.
ABỤỌMA NA AZỊZA – Ps: 30: 2-4, 5-6, 11-12, 13.
Azịza: Aga m eto gị O Chineke n’ihi na Ị zọpụtala m.
Aga m eto gị O Chineke n’ihi na Ị zọpụtala m,
Ị kweghị ka ndị iro m merie.
Chineke Ị zọpụtala m n’ala mmụọ,
Naanị m ka Ị zọpụtara na ndị dabara n’ọnụ ọnwụ. Azịza
Ụnụ ndị kwụdosiriike na Chineke kụọrọnụ ya egwu,
chetanụ ịdị nsọ ya, ma toonụ ya.
Iwe ya anaghị ete aka,
ma amara ya na-adịgide,
n’oge abalị ịkwa akwa na-adị,
ma ka chi bọrọ añụrị na-adị. Azịza
Nụrụ olu m, ma meere m ebere, Chineke,
Chineke bụrụ onye enyemaka m.
Ị meela ka irụ ụjụ m ghọọ ọñụ,
Chineke na Chukwu m, aga m eto gị ebeebe. Azịza
Dozienụ ụzọ Onyenweanyị, Meenụ ka ụzọ ya kwụrụ ọtọ, mmadụ niile ga-ahụkwa nzọpụta nke Chineke.
OZIỌMA – 7:24-30
Ihe ọgụgụ ewetara n’oziọma dị asọ nke Luk dere.
Mgbe ndị ozi Jọn lara, Jesu malitere ịgwa igwe mmadụ ahụ okwu banyere Jọn sị, “Olee ihe ụnụ gara ka ụnụ hụ n’ime ọzara? Ọ bụ ahịhịa nke ifufe na-efegharị? Gịnị ka ụnụ pụrụ ka ụnụ hụ? Ọ bụ nwoke yi uwe dị lọrịlọrị? Lee, ndị yi oke uwe; ndị bi n’oke oriri na n’oke ọñụñụ bi n’obi ndị eze. Gịnịkwa ka ụnụ pụrụ ka ụnụ hụ? Ọ bụ Onyeamụma? Ee, asị m ụnụ, ọ bụ onye kariri onye amụma. Ọ bụ maka onye a ka e ji dee sị, ‘Lee ana m ezipụ onye ozi m n’ihu gi, onye ga-edozi ụzọ gị tupu ọbịbịa gị’. Agwa m ụnụ: n’etiti ndị niile nwaanyị mụrụ, o nweghị onye ọbụla ka Jọn, ma onye dị karịrị nta n’alaeze Chineke ka ya ukwuu.” Mgbe ha nụrụ nke a, ndị mmadụ niile na ndị ọnaụtụ nọ n’ebe ahụ bụ ndị e mere mmirichukwu nke Jọn kwere n’ezie na Chineke bụ onye eziomume; ma ndị Farisii na ndị ọkaiwu jụrụ imezu ebumnobi Chineke n’ebe ha onwe ha nọ. Ha ekweghịkwa ka Jọn mee ha mmirichukwu.
Nna, site n’ihe niile I nyere anyị, anyị na ehunyere Gị achịcha na mmanya nke a. Ebe anyị na-efe Gị ugbu a, nara onyinye anyị ma were nkwa ndụ ebighi ebi ikwere anyị gbaa anyị ume. Mezuoro anyị ihe ndị a site na Kristi Dinwenụ anyị. Amen.
EKPERE ANATACHA ORIRI NSỌ
Nna, mee ka orikọ anyị nke a kwalite n’ime anyị ịhụ ihe nke eluigwe n’anya. Meekwa ka nkwa na nchekwube dị n’ime ya na-eduzi ụzọ anyị n’elu ụwa a. Anyị na-arịọ ihe ndị a site na Kristi Dinwenụ anyị. Amen.
Categories Igbo Advent Daily Readings Post navigation
Sunday Mass Readings for January 16 2022, 2nd Sunday in Ordinary Time
Daily Mass Readings for January 17 2022, Monday of 2nd Week Ordinary Time